Sida loo kiciyo lacag bixinta wireless-ka ➡️ ulator Emulator.online ▷ ➡️
Sida loo kiciyo lacag-bixinta wireless-ka ah
Waad fikireysaa en ku soo iibso un desktop cusub, oo ka mid ah kuwa badan oo ilaa hadda la arkay, waxaad aragtay dhowr con saldhig de Kicinta bilaa wireless isku dhafan. Xalkan te khiyaanooyin badan, horeyba in ma jeclaan lahayda dib u dejiso tu casriga ah si fudud adoo dul dhigaya taageerada ku habboon, adigoon iska furin naftaada inta udhaxeysa fiilooyinka iyo korontada; hase yeeshe, isagu ma oga haddii su telefoonku wuxuu taageeraa tikniyoolajiyadda lacag-bixinta wireless, wax fikrad ah kama lihid sida loo isticmaalo.
by haddaba, marka hore meel, iswaafajinta taleefannada casriga ah (o mid kasta qalab elektaroonik ah) oo leh tikniyoolajiyadda lacag-bixinta wireless-ka ah ayaa si fiican loogu caddeeyay xaashideeda xogta. xogta farsamo yaqaanada; Intaa waxaa dheer, adoo adeegsanaya qaar ka mid ah adapters gaar ah waxaa macquul ah in la dhexgeliyo tikniyoolajiyadan xitaa aaladaha aan u lahayn asal ahaan, siempre kuwaas oo ku qalabeysan yihiin USB-C, microUSB, ama isku xiraha danabka.
En las Baararka soo socda ee tilmaamahan waxaan ku sharxi doonaa, si hufan, maxay yihiin qaababka hawlgalka ee teknolojiyadda su'aasha ah waxaanan ku tusi doonaa, si dhab ah, sida loo kiciyo lacag bixinta wireless-ka xitaa qalabka aan lahayn. Sidee u leedahay Taasi ma dhabbaa wixii aad rabtay Saber? Kadib sii wad akhriska. Raadi wax kasta oo lagu sharxay hoosta.
Sida loo suuro galiyo wadaagida upload-ka wireless-ka
Kahor xitaa intaadan u gudbin qaybta wax ku oolka ah ee tilmaamahan oo aan ku sharaxo, ficil ahaan, sida loo kiciyo lacag bixinta wireless-ka aaladahaaga (xitaa kuwa laga yaabo inaysan wadan ahaan ku qalabaysanayn tikniyoolajiyadan), aan ku siiyo macluumaad dheeri ah.
Hawlgalka saldhigga nidaamyada lacag-bixinta wireless waa mid aad u fudud: wareejinta tamarta waxaa lagu sameeyaa xiriir, iyada oo aan la isticmaalin fiilooyinka isku xirnaanta ee u dhexeeya aaladaha ku lug leh. Hagaag, laakiin ... sidee?
Wax walba waxay ku saleysan yihiin sharciga Faraday, kaas oo xukuma mabda'a ahfirfircoonida elektaroonigga: tamarta ay soo saarto saldhigga lacag la'aanta wireless, markay xiriir la yeelato qalab la jaan qaadaya isla tiknoolajiyadda, waxay soo saartaa aag elektromagnetic ah oo awood u leh inuu tamarta ugu gudbiyo batteriga, isagoo dhaqaajinaya "walxaha" elektiroonigga ah
Si faahfaahsan, tamarta ay bixiso saldhigga lacag-bixinta (oo laga helo marinka ay ku xiran tahay) ayaa loo wareejiyaa, iyadoo loo marayo gudbiyeyaasha meeleeyay mismoin batariga qalabka, taas oo ku ururinaysa mahadsanid qaatayaasha badanaa lagu dhejiyaa xagga dambe ee qalabka waayo, dib loo soo cesho.
Tamarta, gudaha aagga elektromagnetic-ka, waxay ku socotaa mahadsanid awooda. Tusaale haddii aan ku siiyo, ka fikir laba qof oo xarig adag haysta (waad awoodi kartaa eeg tan dambe sida aaladda elektromagnetic): haddii mid ka mid ah labada qof (matalaya, tusaale ahaan, salka culeyska) uu xoog ku dabbaqo xarigga iyo dhaqdhaqaaqyada si ay u dhaliyaan mowjado, waxay sidoo kale ka imaan doonaan dhinaca kale ee xarigga sidaas darteedna, qofka kale (kiiskeenna, batteriga dib loo soo celinayo), iyada oo aanu kan dambe sameynin waxba.
Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin in korantada sare ee elektromagnetic-ka, ay si dhakhso leh u wareejinta tamarta: si kastaba ha noqotee, tani macnaheedu maahan in saldhig ballaaran oo lacag-bixin ah ay si dhakhso leh bateriga ugu buuxin karaan. Sababta waa iska cadahay: si looga fogaado qarashka xad dhaafka ah ama waxyeelada jireed ee ka dhasha meelaha birlabta ee birlabta, soo saarayaasha xeedho iyo aalado taageera xadka lacag bixinta wireless-ka. ugu badan ee koronto in ay Xawaaraha wareejinta si firfircoonaan leh.
Heerka ugu caansan ee lagu xakameynayo fiilada korantada ee elektromagnetic-ka ayaa ah heerka Qi. Marka lagu daro qeexitaanka xeerarka amniga lagama maarmaanka u ah ilaalinta nabadgelyada waxyaabaha iyo dadka, ka fogaanshaha xaaladaha ba'an sida wareegyada gaaban ama kuleylka, ayaa qeexaya hab dhismeedka moduleka iyo dareeraha oo loogu talagalay labada saldhig iyo qalab.
Gaar ahaan, qalabka u hoggaansamaya heerka Qi (inta badan kuwa suuqa jooga) waa inay ku yaalliin masaafo u dhexeysa 45 iyo 400 milimitir. Intaa waxaa dheer, gudbiyeyaasha iyo qaateyaasha xeedho iyo aaladda waa inay si fiican isugu habboon yihiin.
Tiknoolajiyada sidoo kale PMA waxay u isticmaashaa sharciga Faraday si ay ugu soo buuxiso fiilo la'aan, hase yeeshe, shuruudaha isticmaalka iyo qalabka qalabka ayaa aad uga duwan kuwa loo isticmaalay heerka Qi; Waxay u socotaa iyada oo aan la sheegin, sidaas darteed, in qalab ku habboon oo keliya heerka Qi aan loo isticmaali karin xeedho si gaar ah u raacaya tiknoolajiyada PMA (oo aan ku baahnayn qaybta casriga ah), iyo dhinaca kale.
Hadda oo aad haysatid macluumaad teori ah oo kiiska ah, waxaa la joogaa xilligii aad sharxi lahayd, ficil ahaan, sida loo kiciyo lacag bixinta wireless-ka. Marka hore in waa inaad in la sameeyo, kiiskan, waa in la qaato xisaabta labadaba xaashida farsamada ee qalabka aad gacanta ku hayso iyo astaamaha xeedho.
Haddii labada aaladoodba ay taageeraan isla heerka cabirka (tusaale. Qi), waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso ayaa ah daaqada qaybta qalabka ay ka kooban tahay qaatayaasha wireless dusha sare ee saldhiga lacag bixinta oo, dhinaca kale, ay ku jirto i gudbiyeyaasha: daqiiqado yar ka dib, kan dambe waa inuu "ogeysiiyaa" joogitaanka qalab dib loogu buuxinayo oo loo abuurayo aagga magnetka, kaas oo lagu bilaabayo dib-u-soo-buuxinta iyadoo la adeegsanayo soo-kicinta.
Haddii midka u baahan in dib loo buuxiyo uu yahay taleefan casri ah ama kaniini ah, waa ku filan tahay ku dheji xarkaha wireless-ka, adigoo raacaya tilmaamaha ku habboon, oo sug in dib u buuxintu ay si toos ah u bilaabato; Qalabka kale, sida sameecadaha dhagaha la ', dhinaca kale, waa in si habboon loo dhexgeliyaa meelaha gaarka ah ee xeedho u dhigma. Waxqabadyo dheeri ah ama dejin looma baahna.
Haddii qalabka aad haysato uusan taageerin lacag-bixinta wireless, waad ku hagaajin kartaa adiga oo iibsanaya kuwa saxda ah qaatayaasha, kaas oo lagu xidhi karo dekedda USB-C, micro USB ka Hillaac hillaac (qaar ka mid ah aaladaha Apple) illaa taleefankaaga casriga ah, kaniiniga ama qalab kale oo aad rabto. Markaad isku xirto, waxaad si toos ah ugu dhejin kartaa xarkaha wireless-ka si aad u bilowdo inaad ku dalacdo qalabkaaga.
Waxaan kugula talinayaa: kahor intaadan iibsan aalad nuucaan ah, hubi inay la jaanqaadi karto qalabka aad damacsantahay inaad ku dalacdo iyo inuu yahay mid tayo fiican leh. Dareenkaan, waxaan kuu soo jeedinayaa inaad aqriso faallooyinka iyo dib u eegista isticmaaleyaasha kale ee iyagu horey u soo iibsaday.
Ugu dambeyntiina, haddii aadan haysan xeedho wireless ah, waad ku farxi doontaa inaad ogaato inay jiraan dhowr saldhig oo wax lagu amro oo ku yaal suuqa, qaarkoodna xitaa awood u leh inay ku soo oogaan aalado badan isla markaas isla markaana u dhaqmaan sidii Bangiga Awoodda, Siinta tamarta xitaa maqnaanshaha shabakada korantada.
Si aad inbadan u ogaato, waxaan kuu gudbinayaa inaad aqriso tilmaamahayga ku saabsan sida fiilooyinka fiilooyinka wireless ay u shaqeeyaan, taas oo aan ku sharaxay astaamahooda si faahfaahsan waxaanan ku siiyay qaar consejos waxtar u leh iibsashada Fadlan ugu yaraan fiiri!
Weli waxaad ka hadlaysaa ku-dallaca wireless, waa inaad ogaataa in qaar ka mid ah taleefannada casriga ah, guud ahaan laga soo bilaabo noocyada sareeya, waxay la jaan qaadayaan qeexitaanka lacag celin: awoodaan u shaqeeya sida wireless-ka runta ah "bangiyada korantada" oo ay ku soo dallacaan aalado kale oo leh adeegsi lacag la'aan ah (ama qaatayaal qaas ah), sida sean taleefannada kale ee casriga ah ama waxaa loo isticmaali karaa saacado caqli-gal ah iyo dhegaha wireless-ka.
Si wax walboo ay si wanaagsan u socdaan waxaa lagama maarmaan ah in labada aaladood ee ku lug leh la daarayo, in ay suurtagal tahay in la dhiso a taabashada jirka iyo in aysan ku jirin dusha sare ee birta. Xusuusnow, si kastaba ha noqotee, in sababo nabadgelyo awgood dib-u-dhigiddu ay aad uga gaabinayso heerka.
Inkasta oo dhammaan taleefannada casriga ah ee ku-dallaca wireless-ka ay awood u leeyihiin inay helaan awood, kaliya qaar ka mid ah moodooyinka gaarka ah ayaa bixin kara, iyagoo kicinaya shaqeyn gaar ah ee nidaamka hawlgalka.
Tusaale ahaan, taleefannada casriga ah Huawei socon muuqaalkan waxaa loo yaqaan wireless lacag celin waana in laga hawlgeliyaa liiska Dejinta> Bateriga Android- Mar uun aaggan, haddii taleefankaagu uu ka qaadi karo qalab kale, waa inaad aragtaa ikhtiyaarka Lacag la'aan wireless qalab kale. Si aad u hawlgeliso hawsha habboon, u gudub EN biiro u dhigma.
Shaqeyn isku mid ah oo ku saabsan qalabka calaamadeysan Samsung taa badalkeedana la yidhaa PowerShare Wireless: Si loo xaqiijiyo in aaladda aad adigu leedahay ay taageerto, furaagga ogeysiinta Android oo raadi astaanta PowerShare Wireless (ka baytariga leh fallaadh midig u tilmaamaysa). Haddii aad aragto, markaa waxaad u isticmaali kartaa aaladda saldhigga lacag-bixinta: si aad u kiciso shaqada ku habboon, taabo badhanka aan tilmaamay in yar ka hor oo sug farriinta inay soo muuqato Diyaar u ah isku xirnaanta.
Hadda, iyada oo aan loo eegin tiknoolajiyada la adeegsaday, waxa kaliya ee ay tahay inaad sameyso waa inaad dhigtaa taleefanka casriga ah, smartwatch, samaacadaha dhagaha ama aalad kasta oo kale oo dib looga buuxinayo bartamaha taleefanka / kiniiniga oo u shaqeeya sidii bangi awood leh: marka wareejinta korontadu bilaabato, Adiga waa inuu ku arkaa ogeysiis muuqaal ah oo ku saabsan qalabka diraya awoodda, iyo jawaab laga maqli karo aaladda helitaanka.
Fadlan la soco in teknolojiyadda lacag soo celinta, inta badan kiisaska, aan la isticmaali karin haddii qalabka u shaqeynaya sida xeedho uu leeyahay heer xukun oo aad u hooseeya (marka laga hadlayo HUAWEI iyo Samsung, batteriga waa inuu lahaadaa in ka badan 20% haddii kale, wareejinta awooda ma bilaabaneyso). Faahfaahin dheeraad ah halkan.
Sida loogu abuuro sumadaha Gmail
Sida saameyn loogu yeesho barta Instagram